एभोकाडोको एउटा यस्तो रूख, जसले कमायो एकै बर्षमा पचास हजार ! साैखले बनायाे ब्यापारी :: BIZMANDU
एभोकाडोको एउटा यस्तो रूख, जसले कमायो एकै बर्षमा पचास हजार ! साैखले बनायाे ब्यापारी
प्रकाशित मिति: Jan 8, 2017 5:15 PM
पोखरा। पोखरा उपमहानगरपालिका–१७ विरौटीकी विष्णुमाया शर्माकाे घरमा एभाेकाडाेकाे एउटा रूख ९ बर्ष अघि साैखले राेपियाे । साैखका रूपमा राेपिएकाे त्यहि एभाेकाडाेकाे रूखले अहिले विष्णुमायालार्इ वर्षकाे पचास हजार रूपैँया भन्दा बढी कमाइदिएकाे छ ।
एभोकाडोको एउटा यस्तो रूख, जसले कमायो एकै बर्षमा पचास हजार ! साैखले बनायाे ब्यापारी को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।